आईओएमको डिनमा प्रा डा दिव्यासिंह शाह नियुक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आईओएमको डिनमा प्रा डा दिव्यासिंह शाह नियुक्त
असार ३, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डिनमा प्रा डा दिव्यासिंह शाह नियुक्त भएकी छन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सर्च कमिटीबाट सिफारिस भएका ३ जनामध्येमा प्रा डा शाहलाई डिनमा नियुक्ति गरेको हो ।
प्राडा प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त कमिटीले प्राडा प्रदीप वैद्य, प्रा डा शाह र प्रा डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिवि आईओएमको डिनमा डा. शाह नियुक्त भएको उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले कान्तिपुरलाई बताए । प्रा डा शाह त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मिर्गौला विभाग प्रमुख हुन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सकसमेत हुन् ।
जेठ २२ मा प्रा डा जगदीश अग्रवालले उमेर हदका कारण डिनबाट अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो ।
प्रकाशित : असार ३, २०७७ २०:०८
कर्णालीका आइसोलेसनबाट ४९४ डिस्चार्ज
हालसम्म ११०४ मा संक्रमण पुष्टि, आइसोलेसनमा रहेका ६०७ मध्ये ३ आइसीयूमा
असार ३, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या लगातार बढ्दा त्रसित कर्णालीवासीले बल्ल राहतको सास फेरेका छन् । निको भएर घर फर्किनेको संख्या बढ्दा जनमानसमा त्रास घटेको हो ।
बुधबारसम्म १ हजार १ सय ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा ४ सय ९४ जना निको भएर घर जान पाएका हुन् । पुष्टि भएका कुल संक्रमितमध्ये निको हुने करिब ४५ प्रतिशत रहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी दैलेखबाट ३ सय ३३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । दैलेखमा ६ सय ३६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसन केन्द्रमा ३ सय २ जना संक्रमित छन् । एक जना संक्रमितको क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएको थियो । महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार सुर्खेतबाट ७६, सल्यानबाट ४१, कालीकोटबाट २५ र जुम्लाबाट १९ जना डिस्चार्ज भएका छन् । अहिले ६ सय ७ जना आइसोलेसनमा छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काका अनुसार धेरैजसो संक्रमितहरूमा बाहिरी लक्षण नदेखिँदै दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ दिनसम्म लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षणबिनै घर पठाउन सकिने भने पनि यहाँका बिरामीको पीसीआरपछि पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘लामो समय लक्षण नदेखिएका संक्रमितमा भाइरस जीवित रहने अवस्था पनि रहँदैन ।’
संक्रमतिमध्ये प्रदेश अस्पतालमा अहिले एक जना आयूसीयू र दुईजना सेमी–आइसीयूमा छन् । प्रदेश अस्पतालस्थित कोरोना उपचार केन्द्रका सुपरभाइजर डा. नवराज केसीका अनुसार दैलेखको दुल्लुका २८ वर्षीय युवक विष सेवन गरेर उपचारका लागि ल्याइएका हुन्, जसलाई कोरोना संक्रमण पनि देखियो । उनी आइसीयूमा छन् भने सुर्खेतका ४६ र २२ वर्षीय युवकहरू सेमीआइसीयूमा छन् । आकस्मिक कक्षमा उपचाररत अर्का एक युवकलाई पनि आइसीयूमै राखेर उपचार गर्ने तयारी भइरहेको डा. केसीले बताए । अन्य रोगको लक्षणको आधारमा उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
जेठ ५ मा दैलेख आठबीस नगरपालिकाका एक जनामा देखिएको संक्रमण कर्णाली प्रदेशका लागि पहिलो केस थियो । त्यसयता रुकुम पश्चिममा बाहेकका ९ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म १८ हजार ५ सय ९७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसैबीच, झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी २५ वर्षीया महिलामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–८ की ती महिला सोमबार घर नजिकै झुण्डिएको अवस्थमा भेटिएकी थिइन् । बुधबार मेहलकुना अस्पतालमा पोष्टमार्टमअघि स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. तिवारीले बताए । जेठ १२ मा श्रीमान् र ३ वर्षीया छोरीसँगै भारतबाट आएकी उनी १४ दिनसम्म सिम्ताकै क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्केकी थिइन् । उनको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई भनिएको र उनको सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यलगायतको स्वाब संकलन गरिने डा. तिवारीले बताए ।
प्रकाशित : असार ३, २०७७ १९:५९